Shiinaha WIK9070 Soo Saaraha Gawaarida Gawaarida | 4 Wilk
4 gaari xamuul ah oo forklift ah
4WD Gawaarida Gawaarida Forklift
4WD isteerinka dambe ee Gawaarida Gawaarida
4 × 4 Forklift-shiinaha
Moodooyinka Backhoe Loader
Backhoe Loaders iib ah
Qod qodistayaasha Oo Kireysa
Baabuurta xamuulka qaada
Is Loading Mashiinka la taaban karo
mashiinka fiicni la taaban karo
Mashiinnada Isku-dhafan ee la taaban karo
Gawaarida Gawaarida Shiinaha
Xamuulka Dhamaadka Hore
Xajmiyaha Giraangiraha oo Xajmi buuxa ah
WIK9070 Gawaarida Gawaarida
WIK 9070 barta iibinta alaabta
· Mashiinka caanka ah ee caanka ah wuxuu leeyahay awood xoog leh wuxuuna buuxiyaa shuruudaha hawlgalka hufan.
· Naqshadeynta saxda ah ee saxda ah iyo koontaroolka keydinta tamarta ee horumarsan ayaa mishiinka ka dhigaya isticmaalka shidaalka.
· Isticmaalka taageereyaasha qaboojinta cusub iyo kuwa aamusnaanta waaweyn ayaa buuqa mashiinka ka dhigaya mid hooseeya;
· Qaado tiknoolajiyad casri ah oo turbo-qaadis si kor loogu qaado la qabsiga mashiinka ee plateau;
· Daboolka faneel ee u gaarka ah masafku wuxuu si weyn u kordhiyaa hawo qaadashada matoorka iyo awoodda nidaamka kala qaadista kuleylka, iyadoo la hubinayo in mashiinku u shaqeeyo si joogto ah oo hufan.
· Nidaamka Haydarooliga ee horumarsan
· Qaabeynta dhamaadka-sare: Mashiinka ugu weyn, waalka weyn, mootada wareega, mootada socodka, dhululubada, waalka duuliyaha iyo qeybaha kale ayaa dhamaantood ah calaamado caalami ah oo caan ah si loo hubiyo tayada wax soo saarka.
Isku-darka natiijooyinka cilmi-baarista ee ugu dambeeyay, yaree isticmaalka tamarta, hagaajinta naqshadeynta, oo si dhakhso leh uga jawaab.
· Xakamaynta wareegsan ee adag oo sax ah: Hagaajinta astaamaha nuugista gariirka si loo hubiyo in tallaabada joojinta wareegga ay ka saxsan tahay oo xasilloon tahay; iyada oo la kordhinayo keydka miisaanka, mashiinku wuxuu bixiyaa awooda wareegga oo aad u xoog badan;
· Silsilad leh waxqabadka keydka ah: silsilad boodbood ah iyo dhululubo dhejis ah, silsilad baaldi ah ayaa loogu talagalay bakteeriyada, taas oo yareyn karta gariirka mashiinka iyo saameynta, yareyn karta buuqa iyo kordhinta nolosha silsiladda.
· Tikniyoolajiyad isku-dhafan oo labalaab ah: ku kordhi heerka socodka ee waalka weyn ee dhululubo kasta oo kor u kaca ah, usha iyo baaldi si loo kordhiyo xawaaraha shaqada.
Cufan oo waara kalsooni sare
Shassiga la xoojiyay, isteerinka awoodda korontada ku shaqeeya, dariiqa leexashada gawaarida, wuxuu hagaajiyaa dabacsanaanta iyo adkeysiga mashiinka.
Qaybaha muhiimka ah ee usha leh ayaa qaatay qaab dhismeedka been abuurka, kaas oo yareyn kara walaaca isla markaana hagaajin kara adkeysiga adoo bedelaya qaabka iyo dhumucda saxanka.
Boodhku waa mid si isdaba-joog ah loo dhajiyay oo loo sameeyay, ugu dambeyntiina mashiinka caajisku waa caajis, iyo dib-u-dhiska ayaa la shaqeynayaa, kaas oo si fiican u xoojin kara adkaanta hubka waaweyn iyo kuwa yaryar, sii dheereynaya nolosha adeegga pinka iyo shaashadda, taas oo ka fogaaneysa alxanka jabka barta alxanka, waana waarayaa.
· Taarikada baaldi goynta dhammaantood waxay ka samaysan yihiin taarikada birta u adkeysata ee birta u adkeysata, kuwaas oo ku habboon hawlgallada culus, kuna qalabaysan ilkaha baaldi ee duugga ah iyo ilkaha dhinacyada si loo hagaajiyo waxqabadka mashiinka.
· Isticmaalka taarikada birta ah ee dhumuc weyn leh iyo ku darista taarikada wax lagu xoojiyo si loo hagaajiyo iska caabbinta dharka;
· Adoo adeegsanaya baaldi fidsan, sagxadda dusha sare ayaa hagaagsan oo fidsan marka la simo.
· Kordhi berrinka aragga dhammaan jihooyinka, ballaadhi daaqadda hore, daaqadda dhinaceeda iyo daaqadda dambe si loo hubiyo baaxad ballaadhan oo aragga ah, aadna loo yareeyo baraha indhoolayaasha, oo si ammaan ah oo waxtar leh ugu shaqeeya.
· Weynee muraayadda iftiinka samada si aad kor ugu qaaddo muuqaalka kore oo aad u kordhiso hawo qaadashada. Muraayad adag ayaa loo isticmaalaa albaabbada iyo daaqadaha si looga hortago iftiinka qorraxda ee tooska ah;
Dhammaan kontaroolada hawlgalka waxaa loo qaabeeyey loona habeeyey si waafaqsan aragtida ergonomics.
· Xamili hawlgalka waa u fududahay in la xakameeyo.
· Raaxo raaxo leh oo gudaha ku duuban, guddiga bandhigga LCD, kuraasta raaxada.
Ku rakib hawo-qaboojiye iyo hawo diiran si loo hubiyo kuleylka iyo qaboojinta gudaha ee guriga
Hawlgal sirdoon iyo bandhig
· Kormeeraha LCD ee waxqabadka badan leh oo leh shaashad ballaaran, muujinta dhijitaalka ah, kormeer dhammaystiran oo ku saabsan xaaladda shaqada ee mishiinka (xawaaraha wareegga, heerkulka biyaha, cadaadiska saliidda, iwm.), Macluumaadka kala duwan ee hawlgalka ee mashiinka ayaa la weydiin karaa wakhti kasta.
Furayaasha shaqadu si isdaba-joog ah ayaa loogu hagaajiyaa guddiga xakamaynta oo si fudud ayaa loogu dooran karaa badhamada taabashada.
· Adeegsiga nidaamka meelaynta satalaytka GPS, ogaanshaha fog, digniinta cilladda, dayactirka iyo xusuusin otomaatig ah.
Dayactirka iyo dayactirka ku haboon oo dhakhsaha badan ,,,,,,,,,,,
Miiraha saliida, shaandhada saliida tijaabada ah, miiraha saliida shidaalka, iyo kala-sooca saliida-biyaha waxaa lagu rakibay meelo dhulka ku xirmi kara si loo baaro loona badalo.
Taangiga awoodda badan leh ee hawlgalka muddada dheer ah.
Sanduuqa weyn ayaa aad ugu habboon kaydinta alaabta keydka ah.
· Wareeg dayactir iyo dayactir dheer: xulo qaybaha iyo qaybaha tayada sare leh si loo kordhiyo nolosha adeegga loona yareeyo waqtiga dayactirka mashiinka.
WIK 9070 Sifo sifooyin
Model: WIK9070 Gawaarida Gawaarida
Awood qaadashada (m³): 0.21
Xawaaraha wareejinta (RMP): 0-12
Jiirada fuulitaanka ugu badan (°): 25
Awoodda ugu badan ee baaldi lagu qodayo (KN): 45
Awoodda ugu badan ee wax lagu qodayo (KN): 36
Nooca injiinka: YC4DK85
Awood / xawaare (KW / rmp): 62.5 / 2200
Nooca Taayirka: 8.25-16
Cadaadiska nidaamka (MPa): 20
Dhererka ugu badan ee wax qoda (mm): 6245
Dhererka rarka ugu badan: 4630
Qoto dheer ugu qodista badan (mm): 3820
Qoto dheer ugu qodista qoto dheer (mm): 2700
Raadiyaha ugu badan ee qodaya (mm): 6360
Raadiyaha ugu yar ee la beddelo (mm): 2450
Nadiifinta dhulka ugu badan ee cagaf cagafta:（mm）: 310
Qoto dheerida qulqulka ugu badan ee loox cagaf ah (mm): 130
Qiyaasaha guud dherer * balac * dherer (mm): 6300 * 2205 * 2850
Dhererka cabirka (mm): 2850
Kabo-gacmeedka (mm): 2400
Gawaarida (wadada) masaafada (mm): 1675
Dhul nadiifinta ugu yar (mm): 260
Radius of gyration dabada (mm): 1940
Qotomayaasha taayirrada way fududahay in la dhaqaajiyo. Kuwaas oo inta badan loo adeegsado mashaariic yaryar oo magaalada laga fuliyo waxaana loo adeegsadaa maamulka dowladda hoose. Ha ku shaqeyn meelaha jilicsan. Nooca giraangiraha guud ahaan wuxuu ka shaqeeyaa dhulka sibidhka iyo cawska, guud ahaanna ma waxyeeleeyo dusha wadada. Track waa qalab mashruuca, kaas oo burburin kara dusha sare ee wadada. Ujeedada ugu weyn ee qotominta taayirrada lugaha leh ayaan ahayn tan gurguurta. Isticmaalka qotomayaasha taayirrada leh waxaa saameeya deegaanka waxayna leedahay xaddidaadyo cayiman. Waxay samayn kartaa oo keliya shaqo yar. Qodista Crawler waxay asal ahaan la jaan qaadi karaan shaqo ama jawi kasta.
Qashin qubka lugaha leh waa mashiin qodista oo leh taayirro sida qeyb socod ah, oo loo yaqaan 'wheel excavator'. Giraangiraha giraangiraha waxay leeyihiin xawaare socod degdeg ah, ma waxyeeleeyaan dusha sare ee wadada, keligiis ayaa lagu wareejin karaa masaafo dheer, waxayna si dhakhso leh u beddeli kartaa aaladaha hawlgalka kala duwan. Xawaaraha ugu badan ee safarka qotomayaasha gawaarida ajnabiga ah inta badan waa 25-40km / saacaddii, inta badanna kuwa gudaha waa 20-35km / h. In kasta oo waxtarka shaqada ee qodaya taayirrada aysan u fiicnayn sida qashin qodista darajada, marka la barbar dhigo khidmadda wareejinta qaaliga ah ee qodayaasha gurguurta, qoditaanka giraangiraha ayaa leh faa iidooyin dhaqaale oo badan marka la beddelayo goobaha si joogto ah. Si sax ah ayay ugu wacan tahay astaamaheeda gaarka ah ee dhaqdhaqaaqa, dabacsanaanta, iyo waxtarka in godadka taayirrada si ballaadhan loogu isticmaalay qodida iyo ka saarista qalabka sida mashaariicda dayactirka degmada, dhismaha jidadka waaweyn iyo dayactirka degdegga ah.
Qaab dhismeedka ugu weyn ee qotomiyuhu wuxuu ka kooban yahay aalado shaqeynaya, taksi, qaab dil, qalab koronto, habka xakamaynta gudbinta, jiifka iyo qalabka kaabayaasha. Dhexdooda, taksiga, qeybta korantada, iyo qalabka caawinta ayaa dhamaantood lagu rakibay sagxad gebigeedaba la jeexjeexo, taas oo badanaa loogu yeero ujawaabida sare. Gawaarida taayirrada waxay ka kooban yihiin loox, taakuleyn, gear, mooto haydarool, cirifyada hore iyo gadaal, taayirro, iwm, waxaana lagu soo ururiyey jirka wareegaya. Qalabka shaqada ayaa badanaa ka kooban boom, ul, baaldi, ul isku xirta iyo qaybo kale. Marka loo eego qaabkeeda shaqada, baaldiku wuxuu leeyahay qaabab kala duwan sida majarafadaha hore, dhabarka dambe, jiidaada iyo majarafadda qabsada. Sare u kaca ayaa badanaa leh nooca foos goos gooska ah iyo kala-sooc isku-dhafan oo kala-qaybsan. Qaylada qaybaha badan ee baaldiga gadaal ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa alaabooyinka shisheeye ee la midka ah.
Hore: WIK9085 Gawaarida Gawaarida
Xiga: WIK9088 Gawaarida Gawaarida
WIK9088 Gawaarida Gawaarida
WIK9085 Gawaarida Gawaarida